महिलालाई सस्तोमा जग्गा नबेचेको भन्दै अर्धनग्न बनाएर कुटपिट | Citizen FM 97.5 Mhz
Home > समाचार > महिलालाई सस्तोमा जग्गा नबेचेको भन्दै अर्धनग्न बनाएर कुटपिट
महिलालाई सस्तोमा जग्गा नबेचेको भन्दै अर्धनग्न बनाएर कुटपिट
जेठ ३०, सस्तोमा जग्गा नबेचेको निहुँमा दाङमा एक महिला निर्घात कुटिएकी छिन् । भालुवाङ पुरानो बसपार्कमा रहेको जग्गा सस्तोमा नबेचेको भन्दै अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका–९ ठाडो खोलानिवासी दिलमाया पुनलाई अन्य दुई महिलाले कुटेका हुन् ।नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
दिलमायामाथि रेखा र अनिता शाहले आक्रमण गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि घटना बाहिरिएको हो । घटना शुक्रबारको भए पनि भिडियो सार्वजनिक भएसँगै सोमबार मात्रै घटनाबारे चर्चा भयो । भिडियोमा हरियो कुर्ता र रातो सुरुवाल लगाएकी दिलमायालाई रेखा र अनिताले निर्मम कुटपिट गरेको देखिन्छ । उक्त भिडियो भालुवाङ बसपार्कको हो ।
दिलमायामाथि आक्रमण गर्ने महिलालाई ‘मम्मी भयो के छाड्दिनुस्’ भनेर आग्रह गरेको भिडियोमा सुनिन्छ । तर, उनी रोकिएकी छैनन् । बरु लात्तीमुंग्रीले मात्रै नपुगेर दिलमायाको कुर्ता च्यातिदिएको देखिन्छ । अर्धनग्न भएकी अनिता च्यातिएको कुर्ताको टालोले लाज छोप्न खोज्छिन्, तर त्यो गर्न पनि दिँदैनन् ।
दिलमायाको जवाफ सुनेपछि रेखाले थप दबाब दिन थालिन् । रेखाको साथ लागेर बोलिन् अनिता गुप्ता पनि । जग्गा ५० हजारमै जसरी पनि बेच्नुपर्ने दबाब दिइरहे । तर, दिलमायाले टेरिनन् । अनि उनीहरूको आक्रमण सुरु भयो । घडेरीनजिकै रेखा र अनिताले हात हाल्न थालेपछि दिलमाया भागिन् । पुल्चोकतिर दौडिइन् । निर्माणाधीन बसपार्कमा पुगेपछि रेखा र अनिताले घेरा हाल्न भ्याए । पछिपछि अरू पनि एक–दुईजना थिए । रेखा र अनिताले दिलमायालाई समाते । झड्कारेर भुइँमा लडाए । थप्पड र लात्ती बर्साउन सुरु गरे । कुर्ता च्यातेर अर्धनग्न बनाइदिए ।
कुटपिट हुँदै गर्दा भालुवाङ नगर विकास समितिका अध्यक्ष ओमप्रकाश बुढाथोकी र ऐरावती आदर्श बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख विष्णुप्रसाद भुसाल घटनास्थल पुगे । उनीहरूले कुटपिट नगर्न आग्रह गर्दा पनि दिलमायामाथि अत्याचार भइरह्यो । बुढाथोकी र भुसालको पटक–पटकको आग्रहपछि भने उनीहरूले कुटपिट गर्न छाडे । रेखा र अनिताले ५० हजारमा जग्गा बेच्न दिएको दबाब नमानेपछि आफूलाई घडेरीमै कुटपिट गरेको दिलमायाले बताइन् । त्यहाँबाट उम्केर भाग्दासमेत लखेटेको र बसपार्कमा समातेर फेरि कुटेको दुखेसो पोखिन् । ‘मलाई घडेरी भएकै ठाउँमा पिटे, त्यहाँबाट उम्किएर बसपार्कसम्म भागेँ । तर, त्यहाँ पुगेपछि फेरि समातेर लात्ती र मुड्कीले हाने । लगाएको कपडा नै च्यातिदिए । च्यातिएको कपडाको टुक्राले लाज छोप्न खोज्दा पनि दिएनन्,’ दिलमायाले सुनाइन् ।
दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै प्रशासनमा ध्यानाकर्षण पत्र
नरेन्द्र मोदीलाई कालोमोसो दल्ने योजना बनाउदै बैद्य ! एस्तो सम्म गर्ने मोदीलाई ! पढ्नुहोस